Vaovao - tavoahangy fitaratra azo ampiasaina
Nisy tavoahangy fitaratra teto amin'ny fireneko hatramin'ny andro taloha. Taloha dia nino ny faribolam-pianarana fa tsy fahita firy ny gira fitaratra tamin'ny andro taloha, noho izany dia kilasy mpitondra fanjakana vitsivitsy ihany no tokony hanana sy hampiasa izany. Na izany aza, ny fandinihana natao tato ho ato dia mino fa tsy sarotra ny mamokatra sy manamboatra azy io ny vera fahiny, saingy tsy mora ny mitahiry azy, ka dia tsy fahita firy amin'ny taranaka faramandimby. Ny tavoahangy vera dia fitoeran'entana famonosana zava-pisotro nentim-paharazana any amin'ny fireneko, ary ny vera koa dia karazan-fonosana vita amin'ny tantara efa ela. Miaraka amina fonosana fonosana marobe marobe eny an-tsena, ny kaontenera fitaratra dia mbola mitana toerana lehibe amin'ny fonosana zava-pisotro, izay tsy afa-misaraka amin'ny toetra fonosana izay tsy azon'ny fitaovana fonosana hafa soloina.
Ny fampiasana vera hanaovana kaontenera fonosana dia efa nisy hatry ny ela, ary ny famokarana indostrialy lehibe amin'ny tavoahangy sy kapoaka dia efa ho zato taona. Amin'ny kaontenera fonosana, ny tavoahangy fitaratra sy ny kapoaka dia manana tombony maro, toy ny akora betsaka, vidiny ambany, mangarahara avo, ary fitoniana simika tsara. Miaina fofonaina izy io, tsy miova loko, azo sokafana sy mikatona imbetsaka, ary azo averina ampiasaina sy ampiasaina indray; na dia marefo sy mavesatra aza izy io, dia tavoahangy fitahirizana sy kapoaka fitaratra no zava-dehibe foana. Ny fampiasana tavoahangy sy kapoaka fitaratra lehibe dia nahatonga ny fanodinam-bokatra sy ny fampiasana azy io ho zava-dehibe kokoa. Amin'ny ankapobeny, ny fanodinana sy fampiasana indray ny tavoahangy fitaratra sy ny kapoaka dia mora kokoa noho ny fitoeran'entana vita amin'ny akora hafa, ary mila diovina fotsiny izy ireo alohan'ny ampiasaina indray. Ny indostrian'ny vera dia mampiasa vera fako voaodina ho toy ny akora, izay misy tombony lehibe eo amin'ny tontolo iainana. Azo ahena ny angovo. Manjifa 4% ka hatramin'ny 32%, mampihena 20% ny fahalotoan'ny rivotra, mampihena 50% ny fako mineraly ary mampihena 50% ny fanjifana rano. Manomboka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny loharanon-karena, ny firenena manerantany dia miaro ny fanodinana tavoahangy fitaratra sy kapoaka.
Ny habetsahan'ny fanodinana tavoahangy fitaratra dia mitombo isan-taona, saingy io habetsahan'ny fanodinana io dia goavana sy tsy hay refesina. Raha ny voalazan'ny Association Packaging Glass: ny angovo voatahiry amin'ny alàlan'ny fanodinana tavoahangy vera dia afaka manome jiro 100-watt mandritra ny 4 ora, mampandeha solosaina mandritra ny 30 minitra ary mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra 20 minitra. Noho izany, ny vera fanodinana zavatra dia misy dikany lehibe. Ny fanodinana tavoahangy fitaratra dia mamonjy angovo ary mampihena ny fahafahan'ny fako manary fako, izay afaka manome akora betsaka kokoa ho an'ny vokatra hafa, ao anatin'izany ny tavoahangy fitaratra mazava ho azy. Raha ny tatitry ny National Consumer Plastika momba ny tavoahangy plastika an'ny filankevitry ny vokatra simika any Etazonia dia tavoahangy plastika manodidina ny 2,5 miliara no voaverina tamin'ny 2009, ary 28% fotsiny ny tahan'ny fanodinana. Tsotra sy mahasoa ny fanodinana tavoahangy fitaratra, mifanaraka amin'ny paikady fampandrosoana maharitra, afaka mitsitsy angovo sy miaro ny harena voajanahary.